khabarmuluk.com | Trusted Online News Protal in Nepal प्रधानमन्त्रीले किन सुम्पे रास्ट्रपतिलाई कार्यकारीको भुमिका ! – khabarmuluk.com
प्रधानमन्त्रीले किन सुम्पे रास्ट्रपतिलाई कार्यकारीको भुमिका !
ओली सरकारले गर्नुपर्ने काम धमाधम राष्ट्रपति भन्डारीले गरिरहेकी छन्
कोभिड -१९ को खोपको पहलको बाहानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीलाई कार्यकारी भूमिका सुम्पेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले गर्नुपर्ने काम यतिवेला धमाधम राष्ट्रपति भन्डारीले गरिरहेकी छन् । जसका कारण भन्डरी पुनः विवादमा देखिएकी छन् ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखझैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन भएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारत र चीनका राष्ट्रपतिसँग नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकी थिइन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई समेत खोप माग गर्दै पत्र लेखेकी थिइन् । एमाले नेता रावलले राष्ट्रपतिको उक्त कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका हुन ।
कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुखझैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन हो। यसले, के प्रम र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपतिकहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर होरु भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ उपाध्यक्ष रावलले लेखेका छन् । संविधान विद तथा राजनीति दलहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई ओलीले अगाडी सारेकोमा गम्भिर रुपमा हेरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई नेपाललाई खोप उपलब्ध गराईदिन पत्रचार गरेकी छन् । भण्डारीले बाइडेनलाई पत्राचार गर्दै खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले १२ जेठमा चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङलाई टेलीफोन गरेर नेपाललाई खोप उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेकी थिइन । चीनका राष्ट्रपतिले तत्काल १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । खोप मंगलबार नेपाल आउँदैछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षी रामनाथ कोविन्दलाई समेत पत्रचार गरेर कोभिड विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेकी छन् । १३ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षी कोविन्दलाई पत्रचार गरेकी थिइन् ।
सरकारले संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट समेत खोप ल्याउन पहल अघि बढाएको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीमार्फत सरकारले खोप उपलब्ध गराई दिन आग्रह गरेको हो । त्यसका लागि रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् । र, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार राजदूत रेग्मीले पहल सुरु गरिसकेका छन् ।